Samaynta Tutorial Video - laga bilaabo si ay u Expert
> Resource > Record > Samaynta Tutorial Video - laga bilaabo si ay u Expert
Samaynta video tutorial screencasting waa mid ka mid ah hababka ugu caansan tababar iyo soo bandhigidda. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin asaasiga ah inuu kaa caawiyo inaad noqday khabiir screencast ah.
Xeerka aasaasiga ahi
Ha dayicin waxyaalaha aad u ogaato ka hor inta aadan bilaabin in la sameeyo tutorial video. The diyaarinta si fiican loo sameeyo iyo sidoo kale kaa caawin karaan wax badan oo ku badbaadin tan oo mar. Read dhibcood, kuwaas oo ay maraan baaritaan is a, gaar ahaan haddii aad tahay markii ugu horeysay oo ay sameeyaan screencasting.
Waxaad ordi karaan iyada oo qoraal ah laba ama saddex jeer ka hor iyo ka heli dhibcood ka mid ah in la filaayo karo iyo in la hagaajiyo. Taas ayaa kaa caawin kara si aad tutorial video siman oo cad.
Dooro qalab xaq u
Markaas dooran qalab xaq inuu ku soo bilowdo duubay. Halkan waxaa ku qoran liiska talo:
Microphone: . Logitech USB desktop makarafoonka Way fududahay in la isticmaalo iyo la qaadi karo oo ma aha in aad ku darto ah interface Mic analog si aad u computer.
Screen taariikhqorihii: DemoCreator . Waa ah qalab wax lagu qoro screen awood badan si lagaaga caawiyo in aad si fudud u qoraan videos kuwaas oo waxtar leh, oo xiiso leh oo ay ka buuxaan creativities.
Video tafatirka software: Wixii tafatirka aasaasiga ah, waxaan u isticmaali dhisay-in editor of DemoCreator ama video kale oo tafatir weyn qaylqaylin Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) .
Fududee socodka hawsha oo idil
Markaas aynu aad u bilowdo. Waxa aad ku bilaabi kartaa video la fudud is-dhigida iyo dulmar sharaxaad aad tutorial. Markaasay aad u hubiso inaad sheegaysaan wax sax ah u barta ay waqti kooban gudihii. Tusaale ahaan, isticmaalo tilmaantaan 1-2-3 talaabo si dadka si fudud u qaadi kartaa waxa aad ka hadlaysid.
Ka dhig aad joogtid mouse
Ha Dhaqaajinin mouse iyo dib halka hadlaya, ama si joogta ah u hakan in la yidhaahdo wax khusayn. Waxa kaliya ma ahan dhibaya dhageystayaasha, laakiin sidoo kale ka jeedin diiradda u tutorial ah. Habka ugu fiican waa in aad gacanta ka mouse oo ku isticmaal oo keliya marka aad ku socoto inuu u dhaqaaqo tallaabada xigta.
Tafatirka ayaa sare
Haddii aad isticmaasho taariikhqorihii screen leh tafatir sida DemoCreator ama dadka kale, isku day in aad yeero qaar ka mid ah, oo soo doondoon fallaadhaha ama animations daro u soo jiidi u weecday dadka. Ka sokow, ka zoom iyo Tilmaamay jira laba feature screencasting muhiim u ah samaynta tutorial video.
Size file riixo
Inkastoo Flash (Jabbuuti) file waa wax soo saarka yar, waxay u baahan tahay meel web hosting taas oo la socon kara Flash si dadka ay u daawan kartaa in browser ah. Hadda oo ay dadka jecelyihiin inay la wadaagaan videos ay ku hoorto video goobta sida YouTube, badbaadiyo video sida AVI ama MP4. Waxaan isku daynay codec badan Tifaftirayaasha oo helay Wondershae Video Converter ku haboon baahidooda aan u inta badan waqtiga. Waxa aad awood u si loogu badalo video wax soo saarka si ay u qaab kasta oo aad jeceshahay.
Ka tag info shakhsi dhabta ah
Sida qoraaga, marnaba ka maqnaan fursad ay gool burburin weyn aad video leh. Macluumaadka xiriirka Waxaad tegi karo dhamaadka video oo u oggolaan in dad aad u hesho, waxaad ammaani, aad samaysaan si fiican u yaqaan haddii ay suuragal tahay.
Samee Cidday ah ee aad koorsada
Daabacaadda desktop videos saf waa hab wanaagsan oo dadka ku xeeran joogo. Waxa uu ka kooban oo taxane video noqon kartaa isku xidhan, oo had iyo updated. Haddii aad jeceshahay inaad samayso hal xidhmo oo videos taas oo ay si dhow oo aan la xiriirin midba midka kale, waa OK, laakiin xasuuso inaad haysato oo dhan oo iyaga ka mid hoos yaala qaybta la mid ah.
Maqaallo la xidhiidha
Sida loo dar Video Rikoodh Screen on Facebook
Sidee loo Diiwaan Slacker Radio leh Loss Tayada Zero
A-waqtiga dhabta ah taariikhqorihii audio digital diiwaan il kasta oo maqal ah in uu si toos ah u ogaado on your computer.
3 Options Simple u Rikoodh Video Games
Jidkii toosnaa, inaan Qor Videos of Computer Screen
Record Screen Waxqabadka la Sound
Top 5 Alternative si Apowersoft taariikhqorihii screen hawlo awood badan
Best webcam taariikhqorihii 2015
10 Dhibaatooyinka Top iyo Solutions oo ku saabsan Video Catcher
Desktop Record: qabsaday Area kasta oo Desktop
La xiriira kanaalada